Mabhajeti anodzvinyirira yeSpanish stock stock | Ehupfumi Zvemari
Chibvumirano chakasvitswa chekugadzirira kweGeneral State Budget chakagamuchirwa zvakaipisisa nemisika yemari muSpain. Iko kunonyanyozivikanwa katsamba kwave kudonha kweinosarudzwa index yeSpanish stock market, Ibex 35, iyo yatowira pasi pezinga repfungwa 9.000 points muzvikamu zviviri chete zvekutengesa. Kunyanya, yakadonhedza kusvika ku8.867 mapoinzi padanho risati raonekwa kubvira 2016. Anenge mashanu% ezvekukosheswa kwayo kwasara mumazuva maviri, neyakajairika yekutengesa iyo yakaiswa pachena kwazvo pakutenga zvinzvimbo.
Simba remadonhwe aya rave rakakura zvekuti yave nguva yakareba ndisati ndaona kusimba kwekutengesa mumapaki emunyika. Mune ese ese misika yemusika, kunyangwe anga ari iwo makambani emagetsi uye mabhanga akagamuchira chirango chakakura kwazvo, nekuderera mumutengo wavo unosvika ku4 mune mamwe emhando dzakakosha dzeIbex 35. Kumanikidza kwekutengesa kwave kwakasimba zvekuti kwave kutoitika iyezvino nezviri kuitika mu mimwe misika ye mari yakasiyana-siyana kubva kukondinendi yekare, uko kunotenga kwaitekeshera, kunyangwe zvichinyara kwazvo.
Uku kudonha kwemusika weSpanish wemusika unogadzirwa semhedzisiro yekutambirwa kwakaipa kwakaitwa neGeneral State Budget nevamiriri vakasiyana vehupfumi. Mazhinji ematanho akarongwa nemutungamiriri wePedro Sánchez haana kufarira vatyairi zvachose uye afunga kugadzirisa zvigaro zvine hunyanzvi. Kune rimwe divi, ivo vanofunga kuti vanogona kukuvadza yezveramangwana rehupfumi hweSpanish sezvo ichikonzera kushandisa mari pamusoro pezvimwe kufunga.
1 Mabhajeti: yakawanda mari
2 Varapalo kumakambani emagetsi
3 Mutero mutsva pamabasa
4 Kutya kuwedzera chikwereti
5 Inogona kusvika sei iyo Ibex 35?
6 Yambiro neCNMV
Mabhajeti: yakawanda mari
Imwe yedudziro iyo misika yemari inotaura ndeyekuti vanogadzira yakakwira mari yeruzhinji iyo inogona kubatsira iyo chikwereti chenhoroondo dzeveruzhinji iva mukuru kubva ikozvino. Kunyangwe makambani anokuvadza akanyorwa paIbex 35 ayo anogona kudzikisira purofiti yavo mumakore anotevera. Huye, zvese izvi mhedzisiro zvakatodzikiswa mumusika wekutengesa wepasirese, uye iyo yekuderera inogona kupfuuridzirwa muzvikamu zvinotevera zvekutengesa. Nekucheka uko kunogona kutungamira iyo inosarudzika indekisi kuyedza iyo yakakosha nhanho yemakumi masere emapoinzi.
Parizvino gore rino, iyo Ibex 35 yakatosiya 11% yemitengo yayo, mune yakava imwe yemisika yemakambani yakanyanya kurohwa panguva ino. Kune rimwe divi, hazvigone kukanganikwa kana kuti bhegi rakagadzirwa mune rova sezvo iri chaiyo zhizha. Iko kudonha kwave kuri kuenderera uye pasina kana mhinduro kubva kune vanoita mari. Mukati meichi chirevo chine njodzi kumisika yemasheya yenyika, chinhu chakanakisa kune vashoma nevapakati varimari kusave chero chinzvimbo mumisika yemari.
Varapalo kumakambani emagetsi
Pasina mubvunzo, makambani emagetsi ndiwo akanyanya kukanganiswa nekuderera uku kwakasimba mumisika yemari. Muenzaniso wakajeka weiyi tsika wave iwo Endesa zvishoma zvinopfuura 8% zvasara mumazuva maviri chete. Chimwe chinhu chakafanana chakaitika naIberdrola kana Enagás, kungodoma mienzaniso miviri. Icho chikonzero cheaya mafambiro echisimba anokonzerwa nekuti kune matanho muGeneral State Budget anokuvadza zvakanyanya zvido zvavo. Kusvika pakuti ivo vanofanirwa kubhadhara mimwe mitero. Chikonzero chakawanda kupfuura zvakakwana kuti vacheke kukosha kwemitengo yavo nehunyanzvi hwakakosha.
Kumanikidzwa kwekutengesa mumakambani emagetsi kwave kwakanyanya zvekuti mazuva ano varasikirwa, asi mari yakawanda mumasangano emasheya aya. Iko vapindiri vezvemari vatove vazivisa kuti zvinogona deredza mutengo wakanangwa yemakambani aya uye nekudaro yaizotungamira kune yakanyanya kugadziriswa mumutengo wezvikamu zvemakambani aya. Hazvishamise, uye nenzira yemuenzaniso, Endesa yaenda kubva mukutengesa 19 euros kusvika gumi neshanu muzvikamu zvishoma zvemusika wekutengesa uye chimwe chinhu chakafanana chakaitika mumakambani mune ino yakakosha chikamu yemusika wemasheya.
Mutero mutsva pamabasa
Imwe yematanho ayo havana kufarira kwete zvachose kumisika yemari uye izvo zvinosanganisirwa muGeneral State Budget ndeavo vanoreva kuranga kufamba mumisika yemasheya. Nekushandisa kwemutero 0,3% pakutengwa kwemasheya pamusika wemasheya. Chiyero chekuunganidza icho chakanangana neanozivikanwa Tobin uye ane chinangwa chekuswededza padyo kusvika chiuru chemamiriyoni mukati memabhajeti akajairwa. Zvisinei, IPOs, kubviswa kwevagadziri vemusika, zvisungo zvinoshandurwa kuita zvikamu uye zvigadzirwa zvicharegererwa pamubhadharo uyu.
Mune mamwe mazwi, zvinoda vatengesi kuti vawedzere kushanda kwehupfumi kuvhura zvinzvimbo mumisika yequity. Semhedzisiro yemaitiro aya, zvine musoro kuti kubva panguva iyoyo zvichienda mberi mukushandisa kwayo, vatyairi vadiki nevepakati vachasiya kuita mashandiro mukirasi yeasset yemari. Kusvika pakuti ivo vanozodhura kubva zvino zvichienda mberi. Zvine musoro kufunga kuti mashandiro avo pamusika wemasheya achaderera uye nekuda kwechikonzero ichi misika yakadzikisira chiyero ichi chiri kushandiswa kuSpain.
Kutya kuwedzera chikwereti
Izvo zvakashata zvakashata zveaya matanho ari mukutenda kwemisika yemari iyo yakawanda kwazvo masocial network anogona kukonzera yakakura chikwereti muhupfumi yenyika yedu. Izvi zvinoreva kuti chikamu chakanaka chevashambadzi chakabviswa kuita chero basa mumusika wemasheya kana kuyedza kugadzirisa zvinzvimbo mumisika yemabhizimusi yeSpain. Naizvozvo, icho chimwe chikonzero chekufunga nezvacho kutsanangura kudonha kwakakosha kweIbex 35 nedzimwe indices dzechipiri. Uye mhedzisiro iyi kwave kubuda kukuru kwemari kubva mumapaki akanyorwa, kupfuura zvinoitika mumatunhu ekondinendi yakare.
Iyi mamiriro anonetsa zvakanyanya nekuda kwemakore erima ayo anorembera pamusoro pehupfumi padanho repasi rose. Iko iyo purofiti yekambani ivo vashoma uye vashoma mushure mekupedzisira mhedzisiro yakapihwa navo. Naizvozvi, kushandisa mari zvakawandisa mumabhajeti kunogona kuwedzera mwero wechikwereti uye kunogona kukwira kusvika pamatanho ari kunetsekana chaizvo. Kuve mune chero zvazvingava, chimwe chezvakakosha zvikonzero zvinotsanangura kudonha mumusika wemasheya mukati memazuva ano. Uye izvo zvinogona kusimbiswa mumazuva anotevera kana mavhiki.
Inogona kusvika sei iyo Ibex 35?
Mushure mekunge Ibex yadarika chinogumbura chemakumi mapfumbamwe emapoinzi, vatyairi vadiki nevapakati varikufunga kuti indekisi yenyika inosarudza inogona kusvika papi. Vese vaongorori vanobvuma kuti rutsigiro rwakakodzera chaizvo ndere mazana masere nemazana masere. Asi kana ikapfuurwawo mukuderera kwayo, bhenji rinotevera richave riri padanho repfungwa rezviuru zvisere. Ichave imwe yemakiyi ekumisa iyo kutengesa sangria kana zvinopesana, tevera pazasi mune yako quote.
Neichi chikonzero chaicho chaizvo inguva yekuve kunze kwemisika yemari. Nekuti yakanyanya kudarika painogona kurasikirwa pane kuwana Uye zvechokwadi iyi haisi nguva yekuyedza, ndoda nemari. Iko musika wemasheya uri mune imwe yenguva dzayo dzinonetsa kwazvo mumakore achangopfuura uye haina kuita sekuyedza mashandiro mumusika wemasheya. Hapana chimwe chiri kumberi kubva pachokwadi sezvo Ibex 35 iri kudonha zvishoma nezvishoma, kunyangwe paine dzimwe nguva arreón mukusimba kwekufamba uku kune kwakadzika. Sechokwadi chezvinoitika mumisika yezvemari uye kunyanya mune dzenyika yedu.
Hazvishamisi kuti, uye zvine chekuita nemutero pamashandiro emari inowanwa, National Securities Market Commission (CNMV) yanga ichipesana kuranga vatengesi. Naizvozvo, hazvishamise kuita kweava vanotya kubuda kukuru nevaponesi vekunze uye kunyangwe mari yekudyara pachavo inochengetedza zviuru nemabhirioni emauro kuti zviendese mumisika iyi. Chimwezve chikonzero chekuti iwe uve mukushomeka kwemavhiki anotevera. Kunyangwe sarudzo mukupedzisira ichingoenderana newe chete.
Kune rimwe divi, zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti iyo yakadzika maitiro mumusika wemasheya ichaenderera, ndiani anoziva kwemwedzi mingani. Nekuti zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti maitiro kubva zvino zvichienda zvichanyatsodzikira. Kunyanya kana rutsigiro rwemakumi masere nemazana masere mapoinzi atakambotaura nezvake apfuura. Ichave inguva yekuzvinyora kubva kune chero mhando yekutengesa equity. Iwe haugone kukanganwa kuti une zvimwe zvigadzirwa zvekuchengetedza kwaunogona kuita kuti capital yako ibatsire kubva ikozvino. Sechokwadi chezvinoitika mumisika yezvemari uye kunyanya mune dzenyika yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mabhajeti anodzvinyirira yeSpanish stock stock
Makore anodarika maviri apfuura, ndakaedza kuvandudza hupfumi hwangu nekunze kwemasevhisi uye chokwadi ndechekuti zvave zvakandinakira, vandiunzira mabhenefiti sekudzivirira zvinhu nemasevhisi, kusimudzira kutengeserana kwepasi rese, kudyara mari, nezvimwe. Zvisinei, ini ndinokurudzira kwazvo. Kunze kweizvozvo pasina mutero ikambani yakakomba uye yakazvipira!